ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆက်ဆံရေးအတွက် script များ Sexting: sexting ပုံမှန်ဖြစ်လာသလဲ (2018) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Symons, Katrien, Koen Ponnet, မိုက်ကယ် Walrave နှင့် Wannes Heirman ။
မီဒီယာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအသစ် (2018): 1461444818761869 ။
ဒီလေ့လာမှုက sexting န်းကျင်မြီးကောင်ပေါက် '' စံချိန်စံညွှန်းသို့ပင်ကိုယ်မူလထိုးထွင်းသိမြင်ပေးထားပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ scripting နည်းသီအိုရီအားဖြင့်အကြောင်းကြားကျနော်တို့ပေးသောလူငယ်များတစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမျိုး (က "sexting script ကို") ၏ဆက်စပ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အပြုအမူအဖြစ် sexting ရိပ်မိဖို့အတိုင်းအတာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ တစ်ဦးကဂုဏ်ထူးမြီးကောင်ပေါက်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခွအေနအေ (အပုဂ္ဂိုလ်ရေး sexting ဇာတ်ညွှန်း) တွင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှာတွေ့သောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်အတူတူ-အသက်ရွယ်တူ (အထွေထွေ sexting script ကို) အကြားဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှာတွေ့သောအရာကိုအကြားကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒေတာများ (13-18 နှစ်ပေါင်းအသက်မြီးကောင်ပေါက်ကနေမေးခွန်းကတဆင့်စုဝေးကြ၏N = 357, 45% အထီး) ။ ရလဒ်များအရ sexting scripts သည်လိင်ကွဲပြားကြောင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေထက်ရွယ်တူချင်းများကြားတွင်ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေး sexting script ကိုအထွေထွေ sexting ဇာတ်ညွှန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, နှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုလူငယ်ဆီသို့ပညာရေးအရေးကြီးတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျ sexting ၏ဒီဇိုင်းများအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။
keywords လူငယ်ဘဝ, sexting, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ
Albury, K ကိုခရော, K သည် (2012) sexting, သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့လူငယျရဲ့ကျင့်ဝတ်: ကျော်လွန် Megan ရဲ့ ဇာတ်လမ်း။ စဉ်ဆက်: မီဒီယာ & ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာရေးဂျာနယ် 26 (3): 463-473 ။ Google Scholar, Crossref, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Angelides, S ကို (2013) "နည်းပညာ, ဟော်မုန်းများနှင့်မိုက်မဲ": ဆယ်ကျော်သက် sexting ၏အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ငံရေးကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 16 (5 / 6): 665-689 ။ Google Scholar, လင့်ခ်
Baams, L, Overbeek, G Dubas, JS ။ (2015) သရုပ်မှန်အလယ်အလတ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်ဒတ်ခ်ျမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအကြားစပ်လျဉ်းခံစား။ 44-3: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 743 (754) ၏မော်ကွန်း။ Google Scholar, Crossref, Medline
Barrense-Dias, Y ကို, Berchtold, တစ်ဦးက, Surís, JC ။ (2017) sexting နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြဿနာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး 61 ၏ဂျာနယ်: 544-554 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
တိုင်းပြည်အခြေအနေတွင် Baumgartner, SE, Sumter, SR, ပေတရု, ဂျေ (2014) အရေးပါသလား? ဥရောပတစ်လွှား sexting ဆယ်ကျော်သက်များ၏ခန့်မှန်းစုံစမ်းစစ်ဆေး။ 34-157: လူ့အပြုအမူ 164 အတွက်ကွန်ပျူတာများ။ Google Scholar, Crossref, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတွင် Baumgartner, SE, Sumter, SR, ပေတရု, ဂျေ (2015) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တင်ဆက်မှု: ကဘယ်လိုသူကိုရိပ်မိနေသည်သနည်း? 50-91: လူ့အပြုအမူ 100 အတွက်ကွန်ပျူတာများ။ Google Scholar, Crossref, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
ခေါင်းလောင်း, DL, Rosenberg, JG, Ott, ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးရဲ့အစောပိုငျးရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးအတွက် MA (2015) ပုလ်။ အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ကနျြးမာရေး9၏အမေရိကန်ဂျာနယ် (3): 201-208 ။ Google Scholar, လင့်ခ်, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများများအတွက် sexting လှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာများ Bianchi, D, Morelli, M က, Baiocco, R. (2016) Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Rassegna Di Psicologia 33 (3): 5-18 ။ Google Scholar
Bianchi, D, Morelli, M က, Baiocco, R. မြို့ရိုးပေါ်မှာမှန်အဖြစ် (2017) sexting: ခန္ဓာကိုယ်-လေးစားမှုကိုတွက်ချက်, မီဒီယာမော်ဒယ်များနှင့် objectified-ခန္ဓာကိုယ်သတိ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် 61 ၏ဂျာနယ်: 164-117 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
Bowleg, L, Burkholder, GJ, Noar, SM ။ လိင် script များစကေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်: Black ကလိင်ကွဲလူတို့တွင် (2015) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ။ 44-3: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 639 (654) ၏မော်ကွန်း။ Google Scholar, Crossref, Medline
ဘရောင်း, JD, L'Engle, KL (2009) X-rated: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှအမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 36: 129-151 ။ Google Scholar, လင့်ခ်, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Chalfen, R ကို (2009) "ကိုယ်ကသာနေတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်": sexting, "smutty" ရိုက်ချက်နှင့်ပြစ်မှုစွဲချက်။ Visual လေ့လာရေး 24: 258-268 ။ Google Scholar, Crossref, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Cohen ကို, အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံအဘို့အ J ကို (1988) စာရင်းအင်းပါဝါအားသုံးသပ်ခြင်း။ Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates မှ။ Google Scholar
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Conolly, ဂျေ, McIsaac, C ကို (2011) ရိုမန်းတစ်ဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Underwood, MK, ရို, LH (eds) လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး: နို့စို့အရွယ်, ငယ်ဘဝများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: Guilford စာနယ်ဇင်း, စစ 180-203 ။ ။ Google Scholar
Cooper က, K ကို Quayle, အီး, Jonsson, အယ်လ် (2016) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် Self-ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ: စာပေ၏သုံးသပ်ချက်။ 55-3: လူ့အပြုအမူ 706 (716) တွင်ကွန်ပျူတာများ။ Google Scholar, Crossref
Davidson, ဂျေ (2014) sexting: ကျားများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ။ ရိုတာဒမ်: Sense သည်ထုတ်ဝေ။ Google Scholar, Crossref
Doornwaard, SM, Bickham, DS, Rich, အမ် (2015) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းသဘောထားများနှင့်အပြုအမူ: အပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် directional ဆိုးကျိုးများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ 51 (10): 1476-1488 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
မြီးကောင်ပေါက်အကြားDöring, N ကို (2014) သဘောတူညီမှု sexting: abstinence ပညာရေးသို့မဟုတ်ပိုလုံခြုံ sexting မှတဆင့်စွန့်စားမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး? Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့ 8 အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ် (1): ဆောင်းပါး9။ Google Scholar, Crossref
တစ်အကြီးစားအင်တာနက်လေ့လာမှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်တဲ့အရည်-စဉ်ဆက်မော်ဒယ် Epstein, R ကို, McKinney, P ကို, Fox က, အက်စ် (2012) ထောက်ပံ့။ လိင်တူချစ်ခြင်း 59 ၏ဂျာနယ်: 1356-1381 ။ Google Scholar, Crossref, Medline, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Gagnon, W, ရှိမုန်, JH (2005) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လူ့လိင်များ၏လူမှုသတင်းရင်းမြစ်။ 2nd edn ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: Aldine ငွေသွင်းငွေထုတ်။ Google Scholar
ဂေါ်ဒွန်-Messer, D ကိုလူငယ်လူကြီးများအကြားတွင် Bauermeister, ဂျာ Grodzinski, အေ (2013) sexting ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး 52 (3) ၏ဂျာနယ်: 301-306 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
Hasinoff, ကြီးသော sexting ရှိသည်ဖို့ဘယ်လို AA ကို (2016): အွန်လိုင်း sexting အကြံပေးချက်များအတွက်သဘောတူညီခကျြအကွံဉာဏျ။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဝေဖန် / ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာရေး 13: 58-74 ။ Google Scholar, Crossref
ဟင်နရီ၊ N၊ ဝဲလ်၊ A (၂၀၁၅)“ sext” အပြင် - အရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးများအားနည်းပညာဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှု။ ရာဇဝတ်မှု 2015 ၏သြစတြေးလျ & နယူးဇီလန်ဂျာနယ်: (48): 1-104 ။ Google Scholar, လင့်ခ်, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Holman, တစ်ဦးက, Sillars, တစ်ဦးက (2012) "တက် hooking" အကြောင်းကိုပြောဆိုဆွေးနွေး: nonrelationship လိင်အပေါ်ကောလိပ်ကျောင်းသားလူမှုရေးကွန်ရက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေး 27 (2): 205-2016 ။ Google Scholar, Crossref, Medline, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Klettke, B, Hallford, DJ သမား, Mellor, DJ သမား (2014) sexting ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်: တစ်စနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 34 (1): 44-53 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
Kosenko, K ကို Luurs, G Binder, AR (2017) sexting နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 2011-2015: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကြီးထွားလာစာပေ၏ Meta-analysis သည်။ Computer ကို-ဖျန်ဖြေဆက်သွယ်ရေး 22 ၏ဂျာနယ်: 141-160 ။ Google Scholar, Crossref
Krahé, B, Bieneck, S, Scheinberger-Olwig, R ကို (2007a) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ: ကြည်ကြည်နှင့် nonconsensual လိင်ကွဲ interaction က၏သိထားကိုယ်စားပြုသည်။ လိင်သုတေသန 44 ၏ဂျာနယ် (4): 316-327 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
Krahé, B, Bieneck, S, Scheinberger-Olwig, R ကို (2007b) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်သားကောင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ 36-5: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 687 (701) ၏မော်ကွန်း။ Google Scholar, Crossref, Medline, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
မြီးကောင်ပေါက်အကြား Lancasse, တစ်ဦးက, Mendelson, MJ (2007) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်။ Interpersonal အကြမ်းဖက်မှု 22 ၏ဂျာနယ်: 424-437 ။ Google Scholar, လင့်ခ်
Lee က, M က, Crofts, T က (2015) ကျား, ဖိအား, အကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့: လူငယ်များအကြား sexting များအတွက်တွန်းအား untangling ။ Criminology 55 ဗြိတိသျှဂျာနယ် (3): 454-473 ။ Google Scholar, Crossref, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Lenhart, တစ်ဦးက (2009) ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနှင့် sexting ။ ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်အသေးအဖှဲဆယ်ကျော်သက် text messaging မှတဆင့်လိင်ပေးသောဝတ်လစ်စလစ်သို့မဟုတ်နီးပါးဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေစေလွှတ်ကြ၏။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Pew Research Center မှ။ Google Scholar
Lim, အက်စ်အက်စ်အေ (၂၀၁၃) မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူငယ်များ၏“ ကြံစည်ခြင်း” - ကိုယ်ကျင့်တရား၊ မိုဘိုင်းမီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်ရေး 2013: 1-96 ။ Google Scholar, လင့်ခ်, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
lo, VH, ဝေ, R ကို (2005) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေမှ Exposure နှင့်အပြုအမူ။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ 49 ၏ဂျာနယ် (2): 221-237 ။ Google Scholar, Crossref, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
မာစတာ, NT, Casey, အီး, ဝဲလ်, EA ၏။ ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲတက်ကြွအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြား (2013) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ: ဆက်လက်ပြောင်းလဲမှု။ လိင်သုတေသန 50 ၏ဂျာနယ် (5): 409-420 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
မစ်ချယ်, KJ, Finkelhor, D, ဂျုံးစ်, LM ။ (2012) ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်လူငယ်များ sexting ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: တစ်အမျိုးသားရေးလေ့လာမှု။ ကလေးအထူးကု 129 (1): 13-20 ။ Google Scholar, Crossref, Medline, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့ရှုထောင့်ကနေ sexting နှင့်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှု Morelli, M က, Bianchi, D, Baiocco, R. (2016)-ခွင့်ပြုမခွဲဝေမှု: sexism ၏ဖြည့်ညှင်းအခန်းကဏ္ဍ။ 56-163: လူ့အပြုအမူ 169 အတွက်ကွန်ပျူတာများ။ Google Scholar, Crossref
Morelli, M က, Bianchi, D, Baiocco, R. (2017) အပြုအမူတွေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစွဲ Sexting: အရက်သောက်၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ။ လိင်သုတေသနနှင့်လူမှုရေးပေါ်လစီ 14: 113-121 ။ Google Scholar, Crossref
Morrison, DM, မာစတာ, NT, ဝဲလ်, EA ၏။ (2015) "သူကသူမ၏အပျော်အပါးပေးခြင်းအတော်ပင်": လူပျိုတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များမှာမတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ရှုပ်ထွေး။ 44-3: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 655 (688) ၏မော်ကွန်း။ Google Scholar, Crossref, Medline
Owen, EW, Behun, RJ, Manning, JC ။ (၂၀၁၂) မြီးကောင်ပေါက်များအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှု - သုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်မသန်စွမ်းမှု - ကုသမှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဂျာနယ် ၁၉၊ ၉၉–၁၂၂ ။ Google Scholar, Crossref
ပေတရု, J ကို, Valkenburg, ညနေ (2006) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်းပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ဆီသို့အပန်းဖြေသဘောထားတွေ။ ဆက်သွယ်ရေး 56 ၏ဂျာနယ် (4): 639-660 ။ Google Scholar, Crossref
ဆန်, အီး, Gibbs, ဂျေ, Winetrobe, အိပ်ချ် (2014) sexting နှင့်အလယ်တန်းကျောင်းသားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ကလေးအထူးကု 134 (1): e21-e28 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
Ringrose, ဂျေ, Harvey, L, Gill, R. (2013) ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ, နှင့် "sexting": ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ကိုလဲလှယ်အတွက် gendered တန်ဖိုး။ Feminist သီအိုရီ 14 (3): 305-323 ။ Google Scholar, လင့်ခ်, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
ရိုင်ယန်, KM (2011) မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအကြားဆက်ဆံရေး: မုဒိမ်းမှု၏လူမှုရေးဆောက်လုပ်ရေး။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 65 (11 / 12): 774-782 ။ Google Scholar, Crossref
ထွန်းသစ်စလူကြီးအတွက် Sakaluk, JK, Todd, LM, Milhausen, R. (2014) Dominant လိင်ကွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ: စိတ်ကူးနှင့်တိုင်းတာခြင်း။ လိင်သုတေသန 51 ၏ဂျာနယ် (5): 516-531 ။ Google Scholar, Crossref, Medline, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Salter, M က, Crofts, T, Lee က, M (2013) ရာဇဝတ်ကောင်များနှင့် responsibilisation အပြင်: sexting, ကျား, မများနှင့်လူငယ်များ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေး 24 (3) တွင်လက်ရှိကိစ္စများ: 301-316 ။ Google Scholar
မြီးကောင်ပေါက်အကြားအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြုအမူ၏Ševčíková, တစ်ဦးက, Vazsonyi, AT, Širůček, ဂျေ (2013) ခန့်မှန်း။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ 16 (8): 618-622 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
Spišák, S, Paasonen, S ကို (2016) မကောင်းပါပညာရေး? ဖင်လန်နိုင်ငံညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတူးဖော်ရေး, သင်ယူမှုနှင့်အေဂျင်စီ၏ငယ်ဘဝစာမျက်နှာ။ ကလေးဘဝ 24 (1): 99-112 ။ Google Scholar, လင့်ခ်
Symons, K ကို Ponnet, K ကို Walrave, အမ် (2017) Jongeren အွန်လိုင်း! လူငယ်အွန်လိုင်း [Onderzoeksresultaten! သုတေသနရလဒ်များ] ။ ဘရပ်ဆဲလ်: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen ။ Google Scholar
Temple, JR, Paul, JA, van den Berg, P. (2012) ဆယ်ကျော်သက် sexting နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း။ ကလေးအထူးကု & ဆယ်ကျော်သက်ဆေးပညာ 166 (9) ၏မော်ကွန်းတိုက်: 828-833 ။ Google Scholar, Crossref
ဆယ်ကျော်သက် sexting နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဗိမာနျတျော, JR, Choi, HJ (2014) longitudinal အသင်းအဖွဲ့။ ကလေးအထူးကု 134 (5): e1287-e1292 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
Tolman, DL, Davis က, BR, Bowman, က CP (2015) "ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ရုံကိုဘယ်လိုဖွင့်": ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များ 'နှင့်ယောက်ျားလေးများ' 'လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးအတွက်ပုလ်နှင့်ဣတ္အယူဝါဒ၏ကျားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသန 31 ၏ဂျာနယ် (1): 3-31 ။ Google Scholar, လင့်ခ်
van de Bongardt, D, Reitz, အီး, Sandfort, တီ (2014) သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သုံးမျိုးတို့အကြားဆက်ဆံရေး Meta-analysis သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 19 (3): 203-234 ။ Google Scholar, လင့်ခ်
ဗန် Ouytsel, ဂျေ, Ponnet, K ကို Walrave, M (2014) ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဂီတဗီဒီယိုများ၏မြီးကောင်ပေါက် '' စားသုံးမှုနှင့်၎င်းတို့၏ sexting အပြုအမူများအကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့များ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ 17 (12): 772-778 ။ Google Scholar, Crossref, Medline
ဗန် Ouytsel, ဂျေ, ဗန် Gool, အီး, Walrave, အမ် (2017) sexting: ဆယ်ကျော်သက် '' အတွက်အသုံးပြုတဲ့ Application သဘောထားအမြင်များအတွက်စိတ်ရင်းနှင့် sexting ၏အကျိုးဆက်များ။ လူငယ်လေ့လာရေး 20 ၏ဂျာနယ်: 446-470 ။ Google Scholar
Vanden Abeele, M က, ကမ့်ဘဲလ်, SW, Eggermont, အက်စ် (2014) sexting, မိုဘိုင်း porn အသုံးပြုမှုနှင့်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုသည်ဒိုင်းနမစ်: ယောက်ျားလေးများ '' နှင့်မိန်းကလေးများ '' Self-ရိပ်မိလူကြိုက်များ, လူကြိုက်များဘို့လိုအပ်တယ်နှင့်ရိပ်မိရွယ်တူချင်းဖိအား။ မီဒီယာစိတ်ပညာ 17 (1): 6-33 ။ Google Scholar, Crossref, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Walker က, K ကို Sleath, အီး (2017) လက်ရှိအသိပညာနှင့် ပတ်သက်. ကလဲ့စားချေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ Non-ကြည်ကြည်ခွဲဝေမှု၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူ 36: 9-24 ။ Google Scholar, Crossref
Walrave, M က, Ponnet, K ကိုဗန် Ouytsel, ဂျေ (2015) sexting အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်မ: အရှေ့ပြေးပုံစံလိုလိုလားလားမော်ဒယ်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက် sexting အပြုအမူကိုရှင်းပြ။ Telematics နှင့်ပညာပေး 32 (4): 796-808 ။ Google Scholar, Crossref
ရပ်ကွက်, LM, Epstein, M က, Caruthers, အေ (2011) အမျိုးသားများရဲ့မီဒီယာအသုံးပြုမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ: တစ်ဖျန်ဖြေမော်ဒယ်စမ်းသပ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ 47 (2): 592-602 ။ Google Scholar, Crossref, Medline, ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
ဝီ, NE (2010) sexting နှင့်လူငယ်များ: တစ်ဆင်ခြင်တုံတရားတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိရန်အတွက်။ လူမှုရေးသိပ္ပံ6၏ဂျာနယ်: 542-562 ။ Google Scholar, Crossref
Wiederman, မီဂါဝပ် (2005) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏ကျားမသဘာဝ။ အဆိုပါမိသားစုဂျာနယ် 13 (4): 496-502 ။ Google Scholar, လင့်ခ်
Wolak, ဂျေ, Finkelhor, D ကို (2011) sexting: တစ်ဦးက Typology ။ Durham, နယူးဟမ်းရှား: ကလေးများသုတေသနစင်တာကိုကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများ။ : မှာရရှိနိုင် http://unh.edu/ccrc/pdf/CV231_Sexting%20Typology%20Bulletin_4-6-11_revised.pdf Google Scholar
Ybarra, ML, Mitchell က, KJ (2014) "sexting" နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အမျိုးသားရေးနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး 55 (6) ၏ဂျာနယ်: 757-764 ။ Google Scholar
Ybarra, ML, Mitchell က, KJ (2015) လိင်တူချစ်သူတစ်အမျိုးသားရေးလေ့လာမှု, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး (LGB), နှင့် Non-LGB လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအွန်လိုင်းနှင့်လူတစ်ဦးပါ။ 45-6: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 1357 (1372) ၏မော်ကွန်း။ Google Scholar, Crossref, Medline